Carl Henry Global - Ahoana no ahafahantsika manampy anao - ny safidinao!
Rehefa manapa-kevitra ny hametraka ny rafitra an-tserasera ianao dia mety mila fanampiana arakaraka ny fahaizanao manokana, manana 3 safidy lehibe ianao;
Mitadiava olona iray hampiseho aminao ny fomba hanaovana izany amin'ny fampiasana fampahalalana toy ity ity fampianarana ity sy ny fanohanana media. Tena ilaina izany raha manana fotoana betsaka hianarana ianao ary te hampihenana ny fampiasam-bola voalohany tokony hataonao.
CONSULTANCY (miaraka aminao)
Mangataha olona hanao izany aminao ary omeo ny fanampiana ilainao rehefa mila izany. Ity dia fifandanjana hevitra eo anelanelan'ny fotoana sy ny vola takiana hanombohana, azonao atao ny ankamaroan'ny asa ary miditra fotsiny ny fanampiantsika rehefa mila izany ianao, na, raha mila izany ianao!
SERVICE (Ho anao)
Asa misy olona mametraka azy ho anao 100%, ity tonga lafatra ity raha toa ka misy ny vola ary ny fotoana dia ny olana ho anao, satria manao izany isika amin'ny fotoana rehetra ahafahantsika mamita ny asa amin'ny ampahany amin'ny fotoana izay horaisintsika amin'ny voalohany .
Maka ny fiarovanao tena izahay!
"Mitondra fiarovan-tena izahay" - Carl Henry Global dia nanatsara ny fampiantranoana anay ho lasa tranokalam-piarovana - tsy ho ela intsony ny fahafahan'ireo orinasan-tserasera goavana !!